Soomaaliya Iyo Jabaanka Yaa Ku Fiican Fulinta Dhaqamada Islaamka?! | Xaqiiqonews
Soomaaliya Iyo Jabaanka Yaa Ku Fiican Fulinta Dhaqamada Islaamka?!
Jawaabta Su,aasha kore, waa mid kaa yaabineysa, hase yeeshee natiijada waa mid caqli gal ah
Jaamacadda George Washington ayaa sameysay baaritaan ku saabsan waddamada ugu fulin badan dhaqamada Islaamka guud ahaan aduunka oo dhan.
Baaritaanka ayaa lagu soo bandhigay qodoboada soo socda.
-New Zealand ayaa noqotay dowladda koowaada ee ugu fulin badan dhaqamada Islaamka.
-Waddamada kaalmaha hore yimid waxaa ka mid ah Ireland iyo Jabaanka.
-Waddankii koowaad ee Muslim ah ee ugu soo horreeyey waxaa uu yimid kaalinta 38-aad waxaa uuna ahaa Malaysia.
-Waddanka koowaad ee Carab ah waxa uu ahaa Kuweyt waxa uuna galay kaalinta 48-aad.
-Imaaraatka ayaa soo cariirsaday kaalinta 66,aad halka sacuudiga uu noqday waddanka 131,aad
Qiyaasaadka la sameeyey ayaa ku saabsanaa dhaqanka wanaagsan ee qofka sida Akhlaaqda, runta, balan oofinta iwm hase yeeshee fulinta xagga cibaadaadka waa mid u gaar ah adoonka iyo rabbigiisa mana jirto cid qiyaas ku sameyn karto.
Tusaale-Rasuulka waxaa uu yiri “SCW” hadal micnahiisa uu noqonaayo “Waxaa la isoo saaray in aan dhameystiro akhlaaqda wanaagsan”
-Haddaba Jabaanka oo kale caruurta dugsiyada hoose waxaa loo dhiggaa maaddo ciwaankeedu yahay “Wadada Akhlaaqda” mana jiro arday dhacaya gudaha Japan dugsi hoose ilaa dugsi dhexe, sababtoo ah uu jeedkooda waxbarashada ma ahan meerin iyo wax ka hubi,n ee u jeedadooda waxa ay tahay in ay akhlaaq ku beereen qalbiyada ardayda.